Ingobo yomlando ye-Uighurs - Amalungelo Abantu Nobuciko Bokukhanya ngu-∴ PixelHELPER Foundation
Okuthunyelwe okunamathelayo By Oliver Bienkowski On 7. Apreli 2016
ANgoJulayi 29.07.2019th, 1 sishicilela ividiyo yokuqala yesikhumbuzo sethu se-Uighur e #Marrakech, sabhalela wonke amaphephandaba ama-Arab ukuthi senzeni futhi asathola mpendulo ngemuva kokutshela amaphephandaba ukuthi umugqa wokuqala wesikhumbuzo ngowamaJuda angama-gay asele isikhumbuzo njenge- "Holocaust Memorial of Marrakech" emlandweni waseMoroccan. Inzondo yokulwa nobumbano nama-Muslim Uighurs yanqoba. Kuze kube namuhla, alikho izwe lamaSulumane emhlabeni elisekela ama-Uighurs ngendlela adinga ngayo. Ngiyethemba eminyakeni eyi-100 isikhumbuzo sokuqala sabantu base-Uighur Muslim Turkic sizoba yindawo yokuguqula ubumbano lwamazwe amaSulumane nama-Uighurs.
Uma amaShayina ediliza amasonto ayinkulungwane, bekungaba nolaka olukhulu eYurophu. Umlilo ku-cathode ray ungasha ubumbano lomhlaba wonke lapha. Ama-mosque ayi-1000 namasonto obuKristu asevele abhujiswa eChina. Sinikeze wonke ama-Uyghurs ukuthi awakhe kabusha njengekhophi eliqondile phesheya ukuze sakhe ubumbano kubantu abangamaSulumane abacindezelwe emhlabeni wonke. Ngeshwa, iningi lama-Uyghurs asekubalekeni noma emakamu okufunda kabusha amaShayina futhi aswele. Yingakho sisungule i-GoFundme fundraiser. Ngokuya ngokuthi siqoqa malini, sakha umtapo wolwazi, umosque noma ithuna.
I-China ibhubhise ama-mosque angaphezu kuka-3, amathuna nezindawo ezingcwele eminyakeni emithathu. IBeijing ibhubhisa ngokuhlelekile isiko nenkolo yama-Uyghurs amaSulumane. Izithombe zesathelayithi zikhombisa isithombe esesabekayo. I-PixelHELPER izobeka isibonelo futhi yakhe kabusha ithuna le-Iman Asim elibhujisiwe ezintabeni zaseMorocco nge-plaque yokukhumbula ukubhujiswa kwamaShayina. Imininingwane engaphezulu mayelana nephrojekthi
Sifuna intando yeningi eChina. Futhi ungumnikazi wamazwe we-Uyghurs, Hong Kong, Taiwan neTibet. Iqembu lamaKhomanisi kumele lichithwe ngokushesha. Ijuba elikhanyayo elikhanyayo
Sifuna inkululeko yezenkolo eChina, ukuhlonishwa kwamalungelo abantu nokhetho lwentando yeningi ngekusasa elingcono. Onke amathempeli kumele akhe kabusha ngezindleko zaseChina, wonke #Uiguren Kufanele ukhululeke ukuqhuba ukholo lwakho.
Sifuna ukukhishwa kwawo wonke ama-Uyghurs nokwethulwa ngokushesha
inkululeko yenkolo eChina. Wonke umuntu angakholelwa kulokho akufunayo, ku-monster ye-spaghetti endizayo noma kwenye yezinkolo zomhlaba. IChina kumele iyeke ukuvimbela abantu bayo ekusebenziseni inkululeko yezenkolo. Inkululeko yenkolo iyingxenye yomthethosisekelo waseJalimane - umthethosisekelo waseChina kufanele uthathe lokhu njengesibonelo.
Umkhankaso wamaSulumane ama-Uighurs eChina / amalungelo abantu Februwari 24th, i-2021Oliver Bienkowski